Wasiirka Madaxtooyada Oo Boqol Kun Oo Dollar Ku Wareejiyay Guddida Dhismaha Waddada Baligubadle iyo Hargeysa | Hubaal Media
Guriga MAQAAL Wasiirka Madaxtooyada Oo Boqol Kun Oo Dollar Ku Wareejiyay Guddida Dhismaha Waddada...
Wasiirka Madaxtooyada Oo Boqol Kun Oo Dollar Ku Wareejiyay Guddida Dhismaha Waddada Baligubadle iyo Hargeysa
Hargeysa (Hubaal) – Wasiirka Madaxtooyadda Jamhuuriyadda Somaliland Md. Xirsi Cali Xaaji Xasan ayaa maanta aduun lacageed oo cadadkiisu uu dhan yahay 100,000 oo dollar ku wareejiyay Guddida Wadada Baligubadle iyo Hargeysa u dhaxaysa gacanta ku haysa.
Wareejinta Deeqdan lacageed ayaa waxa Goob joog ka ahaa wasiirada Madaxtooyada, Cadaalada, Wasiir ku xigeenka Shaqada, Badhasaabka Gobolka Hawd, Guddoomiye ku xigeenka Labaad ee Golaha Wakiilada, Xildhibaanada Axmed Maxamed Diiriye, Axmed Cabdi Nuur Kijaandhe, gudida dhismaha wadada Baligubadle, Maareeyaha Wakaalada Wadooyinka iyo dadweyne kale.
Hadal kooban oo uu ugu horeyn halkaasi ka soo Jeediyay Sheekh Mubaarak Muuse oo ka mid ah Guddida dhismaha wadada baligubadle ayaa sheegay in si xawli ah ay ilaa iminka ugu socoto wadadaasi.
Waxa uu uga mahad celiyay Wasiirka Wasaaradda Madaxtooyada Xirsi Cali Xaaji Xasan “Runtii Wadadan waxa bilaabay dadka deegaanka, waxaanay ilaa iminka ugu socotaa sidii ugu quruxda badnayd.
Waxa aan amaan balaadhan u soo jeedinayaa Xukuumada, Wasiirka madaxtooyada oo isagu madax u ah ama ay hoos timaado Wakaalada wadooyinku, waxaanan leeyahay wadadani waxa ay u baahan tahay in gacan laga wada geysto, Mar hadii uu wasiirkii madaxtooyaduna inala joogo gacantoodana waynu filaynaa” ayuu yidhi.
Dhinaca kale Sheekh Cabdinaasir Iid Maxamed oo isna ka mid ah guddida dhismaha Wadada Baligubadle oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in bilawga wadadaasi uu soo taxnaa ilaa wakhti hore.
Waxa uu amaan u soo jeediyay dadkii wax ka geystay dhismaha wadadaas oo hada maraysa bilaw. “Dhismaha wadadani waxa uu soo taxnaa ilaa sanado hore, waxaana ilaahay mahadii iminka aynu maraynaa wajigii labaad oo hadda bilaw ah.
Runtii dadkii gacanta ka geystay waan amaanayaa, waxaanan leeyahay ilaahay ha idinka jasaa’i siiyo, waxa iminka dhamaad ku dhaw shantii kilo mitir ee ugu horeeyay, waxaanan rajaynayaa in ay ku xigi doonto shantii xukuumadda oo aanu aad ugu rajo waynahay balanqaadkii ay u qabteen Gobolka Hawd iyo wadadaas in ay qaybtooda ku darsadaan.
Badhasaabka Gobolka Hawd Md. Ibraahim Xaaji Cali Xasan oo isna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in dhismaha wadadan ay si weyn loogu kacay isla markaana looga baahan yahay dadka deegaanku in ay qaybtooda ka qaataan.
“Waftiga xukuumada ee inala jooga Booqasho iyo waxtarba waynu ka rajaynaynaa, intana waxa sii bilaabay gudidii iyo dadka deegaanka, xukuumadana iyada ayaaba Hindise ka ahayd oo wasiirkii ku shaqada lahaa ayaaba iminka inala jooga, wasiirkeenii Madaxtooyaduna dhinac ayuu ka noqday Injineer oo wadooyinka badan ee socda isaga ayaa gacanta ku haya waxaanan leenahay ilaahay ha la qabto” ayuu yidhi.
Waxa uu aad ugu mahad celiyay dadka deegaanka, waxaanu yidhi “Waxa aan aad iyo aad ugu mahad celinayaa dadka deegaanka oo qayb libaax leh ka qaatay sidii ay wadadaasi u noqon lahayd mid dhamaystiranta.
Fariinta aan halkan u marinayaana waxa ay tahay wadadu Dhulka ay marayso dadka beeraha ku leh iyo kuwa deegaanka ahba, inta ay wadadaasi leedahay waa in ay ka sii guuraan, wadadanina mid joogsanaysa maaha.
Sidoo kale dadka ay wadadu marayso waxa aan jecelahay in ay waxtarkana uga dhawaadaan oo ay wax ku daraan dhismaha wadada” ayuu yidhi.
Xildhibaan Axmed Maxamed Diiriye (Nacnac) oo isna halkaasi Kalmado kooban ka soo jeediyay ayaa yidhi “Wadadani waa tii uu madaxweynuhu inoo dhagax dhigay, markaa meshii uu dhagax dhigayba waa la samaynayaa, waxaanay la mid noqon doontaa ta ceerigaabo oo kale, hadii uu alle idmona Madaxweynaha ayaa inoo furi doona.
Wadadani sidaas ayay u socon doontaa, waxaanan ugu talo galo galnay in ay isku xidho Dalalka Ethiopia iyo Somaliland, waxaanay noqonaysaa wadadii ugu qiimaha badnayd” ayuu yidhi.
Maareeyaha Wakaalada Wadooyinka, Xildhibaan Axmed Cabdi Nuur Kijaandhe, Guddoomiye ku xigeenka Labaad ee Golaha wakiilada Cali Yuusuf Axmed iyo Wasiir ku xigeenka shaqada iyo arrimaha bulshada ayaa iyaguna ka hadlay muhiimada ay wadadani u leedahay isku xidhka labada Gobol.
Waxa ay ugu baaqeen Bulshada qaybaheeda kala duwan sidii ay uga qayb geli lahaayeen dhismaha wadadan.
Wasiirka Cadaalada Iyo Garsoorka Somaliland Xuseen Axmed Caydiid ayaa sheegay in uu bixin doono dhaqaalihii laga ururinayay Masuuliyiinta ka soo jeeda Gobolka Hawd.
“Waxa aan aad u amaanayaa dedaalka badan ee la geliyay wadadan, waxaana xukuumadda ka go’an sidii wadadan iyo kuwa kale ee badanba gacan laxaad leh looga geysan lahaa.
Dhaqaalihii lagu xukumay Masuuliyiintana qaybtaydii waa diyaar, waxaanan u sheegi lahaa gudida in ay beriba I soo maraan oo ay iga soo qaadaan hadii alle idmo” ayuu yidhi.
Geesta kale waxa uu dadka deegaanka ugu baaqay in ay qaybtooda ka qaataan sidii loo dhamaystiri lahaa wadada isku xidhaysa Magaalooyinka Baligubadle iyo Hargeysa.
Wasiirka Wasaaradda Madaxtooyadda Jamhuuriyadda Somaliland Md. Xirsi Cali Xaaji Xasan oo isna Madashaasi ka hadlay ayaa yidhi “Marka hore waxa aan bogaadinayaa talaabada la qaaday iyo wadada halkan laga hir geliyay ee sida wacan u dhaqaaqday, anaguna sidii aanu hore u balanqaadnay wado kasta oo la bilaabo waanu isbarbar taagaynaa, wixii aanu ku tari karno waanu ku taraynaa, sidii aanu hore u sheegnayna waxa aanu ugu kala badinaynaa sida ay wadooyinku u kala muhiimsan yihiin iyo Istaraatijiyada dalka uu ku leeyahay iyo sida ay dadku u kala dedaalaan.
Hadii ay wadadu tahay mid dhaqaale ama nabadgalyo, xukuumaddu awooda ayay saari doontaa sidii loo hirgelin lahaa.
Hadii ay wadadu tahay mid ay bulshada dedaashay, waa siyaaasadii dawlada oo waa la dhiiri gelinayaa, waxna waa lala qabanayaa, waa tii madaxweynaha waa tau u dalka ku hagayo, iminka deeqdii ugu horeysay ayaanu bixinaynaa, Toban Kiiloo Mitir marka aad samaysaan shan killo mitir baanu ku daraynaa, Boqolkii Kun ee ugu horeeyayna Waxa aan idiin dhiibayaa Jeegeedii” ayuu hadalkiisa ku soo koobay.
Article horeMAANSO SIILAANYO TIRIYAY IYO JAWAABTII MUUSE BIIXI
Article soo socdaHUBAAL Ka Akhri: Ma Dhab baa In Xiisadda KULMIYE Darteed Madaxweyne Siilaanyo Lagala Baqay Inuu Furo Garoonka Kubbeda Cagta Ee Xawaadle Ee Caasimadda Hargeysa?